Daawo: Caro ka dhalatay markii 'wakiilka SHIICADA ee SOOMAALIYA' lagu arkay Maxfal ku yaalla Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Caro ka dhalatay markii ‘wakiilka SHIICADA ee SOOMAALIYA’ lagu arkay Maxfal...
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Maxfalka Shibis ee magaalada Muqdisho oo ay ka socotay xuska dhalashada Nabigeena Muxammed (NNKH) ayaa maanta lagu qabtay Nin sitay calanka Shiicada, sida uu soo bandhigay maamulka maxfalkaas.
Sheekh Cabdifataax oo kamid ah culimada madxafka oo arrintaas ka hadlay ayaa sheegay in Ninkaas uu sheegtay inuu yahay Wakiilka Shiicada ee Soomaaliya, islamarkaana aan loo baahneyn in dalkeena Soomaaliya lagu faafiyo fikirka Shiicada.
“Ninka aan maanta ku qabanay waan kulanay, waxay soo qaateen Camera iyo calankaas oo ay ku qoran tahay “Yaa Xuseyn”. Waxaa u sheegaya dadka Ahlu-Sunna Waljamaaca in aan raali ka aheyn balaayada kasoo dhex dhalaneysa mowlacyada,” ayuu yiri Sheekh Cabdifataax.
“Ninka aan calanka ka qaadnay waxa uu afkiisa ka yiri waxaa ahay Wakiilka Shiicada ee Soomaaliya, Shiico miyaa u rabnaa Soomaaliya? oo umadda gaaleysiinaya, ma waxaasa qaadan karnaa, Culimada Ahlu-Sunna Waljamaaca nahay ee dadka mowlacyada ku dhex dhuumaya waxaas soo qabta yaa la idinku dhex dhuuman.”
Sidoo kale waxa uu sheegay in Ninka maanta calanka lasoo dhex tagay munaasibada ka socotay Maxfalka uu mar hore dad u direy shirarka ka dhacaya Lubnaan oo u gaar ah Shiicada.
“Marka isku imaano wuu na dhex imaanaya sawir ayuu ka qaadaya email ayuu ku diraya Lubnaan iyo Iiran oo uu leeyahay eega meesha ay Shiicada Soomaaliya mareyso, ma anaga nala gadanayaa?.”
Sheekh Cabdifataax ayaa si weyn uga digay in mowlacyada Ahlu-Sunna ay ku dhex dhuuntaan dadka faafinaya Shiicada, ayna tahay in la iska dhex qabto, maadama uu sheegay in ay yihiin dad gaaleysiinaya muslimiinta.
Ma aha markii u horeysay ee gudaha Soomaaliya lagu sheego dad faafinaya fikiro diimo kale ah, hase yeeshe waa markii u horeysay ee Nin sheeganaya in uu wakiil Soomaaliya ee Shiicada uu calan la dhex tago maxfal kamid ah kuwa dalka.